Kedu SRAM kacha mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Sram ugo gx - nzaghachi nye nsogbu
Sram ugo gx - nzaghachi nye nsogbu
Kedu SRAM kacha mma?
Top nkịta n'etiti 12-anọghị n'ogige atụrụSekit! Na GX Ugo nwereIhereAmalitere draịva 1 x 12 na ọnụ ahịa ọnụ na 2017.31.01.2020
Ebe ọ bụ na ebugharị ya na igwe ọhụrụ, enyekwara m gị ntụnyere dị n'etiti azụ azụ, X01 vs. GXI mere otu ihe ahụ maka mgbanwe ahụ.
Enweekwara m gị nyocha ngwa ngwa nke cranks X01 ndị a, cranks carbon, na nkechi oval, m ga-etinye ha niile na nkọwa nke isiokwu ahụ, mana taa enwere m cassette X01 soXG-1295 na m ga-ewere ilebanye anya na ya lee ya anya wee tunyere ya Eagle GX, ma ọ bụ XG-1275. Mgbe ihe dị ka ọkara oge iji mee ihe, ị nwere ike ịhụ uwe na akwa na cassette. Ọ kachasị mma, anaghị ahụ m mbibi ọ bụla na arụmọrụ.
Enwere m ike ịkatọ gị maka ihe ole na ole: N'aka nke aka, agbụ ahụ anaghịzi arụkọ ọrụ na profaịlụ dị warara ma ọ bụ abụọ ndị a kachasị ukwuu. Enwekwara obere uwe na-eyi ebe a, mgbe agbụ ahụ dị na obere sprockets ọ bụ agbam ume ịgba ọsọ igwe na eriri igwe anaghị m enwe ike ime ya nwayọ, n'agbanyeghị ihe m na-eme. Mana ka m wepụ casset a ma leruo ya anya nke ọma n'akụkụ X01 dị oke ọnụ, ị nwere ike ịhụ agbụ ebe a na-enweghị mmekọrịta na 42T Lee ka ọ si agba ezé na ebe a na 50T.
Nke a dị obere ugbu a na X01 derailleurs. Banyere mkpọtụ. N’ebe a, mgbe ị gafere n’ọwa, ị ga-anụ nke ahụ.
Ọ dịghị ihe dị egwu n'ihi ya enwere m ike ịhọrọ ebe a. Dị nnọọ ka ndị ọzọ nke X01 mbanye katrij, ọ na-abịa na a nwa igbe na ebe a na ọ bụ. Ọ bụrụ na ị na-ele Eagle GX na X01 n'akụkụ, ọ dị mfe ịkọwa nke dị ọnụ.
Biko mara, X01 dị ihe dị oke ọnụ karịa GX. Isi ihe dị iche n'etiti ha abụọ bụ otu esi arụ ya. Ee ee, ha abụọ na-enye 500% gear gear nke ekwuru nke ọma ebe a.
Malite na 10T wee mechaa jiri 50-nha nha aluminom. The gia spacing bụ kpọmkwem otu ihe ahụ dị ka GX can pụrụ ịhụ ihe ndị a atụdo na-eji itinye 50 ezé ndị ọzọ 11 zọọ ígwè ezé, na-na otu mkpọ atụ ẹkenịmde ke ebe. N'ihi nke a, a makwaara nke a dị ka cassette PIN zuru ezu.
Nke a bụ otu teknụzụ ha (SRAM) webatara site na draịva 11 na-agba ọsọ na 2014. Ebe a na azụ bụ n'ụzọ doro anya XG-1275 10. kwuru -50 ezé, Ugo teknụzụ.
Nke a bụ maka GX cassette. Ọ bụrụ n’ịlele anya na XO1, XG-1295 10-50T Ugo teknụzụ. Ihe mkpuchi nke aluminom a na azụ dị iche, nke a bụ isi awọ, nke ọzọ bụ oji, ma ọ bụghị na ha yiri ka ha na-eji ma ọ bụ na-ejigharị ha otu aluminom.
Ma ọ bụrụ na ị na-ele anya ezé ebe a, ọ dị ka ha dabara adaba. Ewezuga NX, cassettes niile nke 11-na 12-ọsọ ọzọ nke SRAM na-eji XD ọkwọ ụgbọ ala - Apụrụ m ịhụ mpaghara eri dị n'akụkụ ebe ahụ ka ekpuchi ya na griiz. I nwekwara uzo ozo n’elu nke etinyere mmanụ ka casset a di njikere maka echichi.
M ga-atụ aro itinye mmanụ griiz na splines ebe a tupu ime nke ahụ. Ọ bụrụ na i lee ụlọ ahụ anya, ee, nke a yiri ka ọ na-eji otu sirinji ezé 50 nke a na-eji na GX. Ma karia nke a, uzo 11 ndi ozo no n’ebe a sitere na otu igwe kromoly, nke bu usoro di oke onu ahia.
Nke ahụ na-emekwa ka ọ dịkwuo mfe. 448 g maka GX na ịwụnye ya na X01 ị na-echekwa kpọmkwem 94 gram, n'ihi na nke a na-abịarute gram 354. Na bike ruru unyi nke ikpeazụ m agbụrụ na mgbe banyere 100 kilomita nke ojiji i nwere ike ịhụ na sekit nke a X01- Cassette dị mma ma na-eji ire ụtọ.
Echere m na ọ dị mkpa igosi gị ezigbo mgbanwe na nkwụsị m zuru oke n'okpuru slack. Nke a bụ n'ihi na ọ na-emetụta ọnọdụ B-Gap yana ọnọdụ B-Gap bụ otu n'ime ntọala dị mkpa maka ugo ụgbọala Eagle, na mgbe mgbe na igwe kwụ otu ebe abụghị nsogbu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ghọta usoro usoro gia n'okpuru ike, ọ na-akawanye njọ ma ị nwere ike ịchọpụta na agbụ ahụ anaghịzi arụ ọrụ na nke abụọ kachasị ukwuu.
Nọmalị ị ga-anụ nnukwu mkpu. Chain na-agbanwe n'ọnọdụ ziri ezi, na mmekọrịta ya na profaịlụ dị warara nke 42 ma ọ bụ 50 cog. BTW, mkpọtụ ị nụrụ n’oge ule m na agbụ n’elu 50 ezé abụghị naanị ịpịpị agbụ n’elu ugwu GoPro, ọ dị m nwute.
Kedu ihe m chere banyere teepu abụọ a ugbu a anyị nọ na njedebe nke ule a? Ọfọn, ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe abịa na X01, m ga-ekwu naanị ịnụ ụtọ cassette ahụ, ọ gwụchara nke ọma ma chekwaa gram 100. Ọ bụrụ na ị chọghị ịma ihe 100 grams na ị na-eche banyere ego dị n'akpa gị, gaa maka ya M na-ahọrọ cassette GX. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana ahụghị m nnukwu mmelite ọ bụla na X01 a na-ewu kaseti ahụ n'ụzọ dị iche.
Mana n'ozuzu m nwere obi uto na ugo nke ugo. Mana ekwesịrị m ịgwa gị, enweghị m ike ichere ịnwa ụdị cassette ahụ na ihe ntụgharị XTR nke ewepụtara ọhụrụ na derailleur azụ site na njikọ dị na nkọwa ahụ. Echefula inwe mmasị, ịkekọrịta, denye aha, na ikwu okwu na isiokwu ma ọ bụ na nke ahụ bụ ụmụ okorobịa, m ga-ahụ gị niile n'okporo ụzọ, nwee obi ụtọ!
Ntụnyere ahụ dị mfe na ndị otu dị elu dị ka Shimanos XTR na Srams XX1, nke dị ka ndị na-ebu teknụzụ gosipụtara nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụzọ dị ịtụnanya: Ọ bụrụ na ị na-achọ otu mgbatị, were yaIhereonye ọ bụla nke chọrọ ụdị ụzọ kacha mma 2- ma ọ bụ 3 nwere ike ịdabere na nke ọhụrụShimanoXTR.
Hey ụmụ okorobịa! Dịka ekwere m, ihe ikpeazụ m chọrọ ime ebe a bụ ịnwale mbugharị XTR na ngwa ngwa XTR 12 ọsọ ọsọ, ha niile nwere cassette SRAM Eagle. Nke ahụ bụ n'ihi na anaghị m ezube ịzụrụ Micro Spline ọ bụla ma ọ bụ cassettes Shimano ọhụrụ, oge erubeghị, n'agbanyeghị na enwere m DT Switzerland hubs na m nwere ike ịchọta Micro Spline freehub maka ya. Maka ndị gị nke hụrụ edemede m, ngwakọ a, XTR 12-speed gearshift with the GX derailleur.
Offọdụ n'ime unu kwuru na sekit ahụ mara mma ma daa ụda. Aga m arụ ụka na nke a rụpụtara nke ọma, mana nke a bụ ule ọzọ ngwa ngwa ka ị nwee ike ịdabere na ya. N'ihi ya enwere m onye na-ebugharị Shimano, ihe nkedo SRAM Eagle GX, casset na derailleur azụ.
Anyị agaba. Otu na mbụ. Ruo n'elu.
Nke ahụ bụ otú m si nweta ya ugbu a. Nke ahụ adịghị njọ ma ọlị, aga m agbago nchikota a n'oge ọ bụla n'ụbọchị. Ya mere, ka dochie GX derailleur na XTR.I.
Aga m ejigharị eriri na agbụ. Ee, ọ dị m ka ya bụrụ na XTR nwere mkpọchi mkpọchi, dịka SRAM derailleurs na-eme. Nke mbu, ihe nkpuchi na-eji igodo 5mm Allen, etinye m obere Loctite na ya ma mgbe ichoro ya ebe a, na onye na-egbu ihe, jide n'aka na ebe a enweghi oghere na nkwụsị B-Gap - echere m na ị kpọrọ ọ bụ. 8 ruo 10 Nm torque na a ịghasa Iji dozie ịgba kposara, jiri a 2 mm Allen isi na mmezi elu jockey wheel na-abụghị nke dị ka SRAM Ugo mbụ gia nke cassette.
Dị njikere na ị nọ n'elu gia ebe a na nnofega aka ahụ, wee jiri igodo 4mm Allen megharịa eriri dị n'ime iji kwụsị ebe a. Igwe dị n'ime ya na-agbachi gburugburu. Ma lee ya.
Ee, Achọghị m ịma eriri nke ntutu m, aga m edochi ya tupu m apụ. Chain ogologo nke Shimano tụrụ aro ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke SRAM tụrụ aro, mana enwere ike ịlele. Ya mere, ha na-arịọ maka nnukwu ihe buru ibu m nwere ebe a gbakwunyere otu, abụọ, atọ, anọ, enwere m njikọ ise, ha na-akwado 4 ma ọ bụ 5 gbakwunyere njikọ ọsọ ọsọ yabụ m nọ n'ime ụdịdị ha maka igwe eji agba agba.
Naanị mara na ụlọ ebe a maka XTR na-ewe ogologo oge karịa nke Eagle ma jiri nkenke usoro a dozie, ọ bụ oge iji lee anya na oghere B. Ma nke ahụ dị mfe iji dozie ọdịiche B a, n'ihi akara akara Shimano etinyela na azụ azụ ha. Daalụ Shimano! Mara ihe! Maka ndị gị chọrọ ịma ihe mechara bụrụ m, dị ka SRAM nke ga-adị 16-17 mm, ka Shimano si kwuo a tụrụ ya ruo axle, nke ahụ ga-abụ milimita 45.
Yabụ na echichi emechara, enwere m XTR mgbanwe levers na derailleurs, 12-speed Shimano drivetrain. Ọ na-arụ ọrụ? Amaghị m, ka anyị nwaa ya! Ọtụtụ ọmụmụ ihe n'otu oge na abụọ n'otu oge. Ọ dị mma, gịnị ka ị chere na ọ na - arụ ọrụ nke ọma, ọ na - arụ ọrụ nke ọma.
O kariri ihe m gosiri gi n'isi ututu m nwere SRAM ugo ugba? M ga-agha ụgha gị ma ọ bụrụ na m kwuru na m chọpụtara na a nnukwu ihe dị iche, ma eleghị anya, ma eleghị anya, a bit nke ìhè nnofega menjuobi edinam, na nke ahụ bụ n'ihi na iyi na esemokwu na a ipigide. Ha abụọ na-arụ ọrụ nke ọma m na m ga-eji nke ọ bụla n'ime oge ọ bụla. Ma enwere ajụjụ ọzọ m ga-anwa ịza na nke ahụ bụ, olee ebe onye na-ere ahịa na-aga? Aga m atule site n'aka onye na-egbu ihe derailleur, na XTR a bụ ihe dịka 28 mm ma ọ bụ dị n'okpuru 3 cm., N'aka nke ọzọ, SRAM Eagle X01 a dị ihe dịka 4 cm, yabụ ana m ekwu maka opekata mpe otu inch a SRAME Ugo si protrudes si eku.
Enwere m olileanya na ịchọta nke a bara uru. Ọ bụrụ otu a, echefula inwe mmasị na ịdenye aha. Enwere nkwubi okwu ọ bụla ma ọ bụ nkwubi okwu ndị ọzọ? Kedu nke m ga-ahọrọ n’etiti ọsọ ọsọ XTR 12 na ugo 12? Ime ihe n'eziokwu nye gi enwere m ike ime ka m mata gi, ejirila m Shimano otutu ihe, ejiri m Ugo kemgbe afo gara aga ma obu ihe ozo.
Ha abụọ na-arụ ọrụ zuru oke ma na-enye ọtụtụ nhọrọ maka draịva m na-eme. Na Shimano dịkarịa ala dị mma, ma eleghị anya ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmetụta nke mgbanwe ọhụrụ ahụ, mana ma ọ bụghị na ọ dị mma. Nnukwu uru m nwere bụ na ha nwere ike ịgbanwe.
Ihe mejuputara ya bu nke gha enyere gi aka inwe otutu ihe ndi ozo n’ime ulo ma oburu n’inwe ihe kariri otu ugbo ala. Ma nke ahụ bụ ihe gbasara ya, ụmụ okorobịa! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko mee ka m mara na ngalaba dị n'okpuru. Echefula na enwere m ederede ole na ole ọzọ na-ekwu maka XTR 12 Speed, ụfọdụ na-ekwu maka SRAM Ugo, rue oge ọzọ enwere m olileanya ịhụ gị n'ụzọ.
Chei ụmụ okorobịa, nwee nụ!
SRAM si Shimano?
1982 wetaraShimanoNa Deore XT, ìgwè ndị izizi maka igwe kwụ otu ebe na ahịa, nke nwere aha ama ama rue taa. Onye asọmpi AmericaIherebatara n'ahịa maka ịgba ịnyịnya ígwè na ihe MTB na 1987.Mar 7 2021
Kedu SRAM Ugo?
NaSRAM Ugobụ usoro MTB gia siIhere, nke nwere gia 12. Ise dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị ugbu a, usoro ojiji sitere na XC / Marathon ruo Enduro. Modeldị kachasị elu bụ wireless, eletrik MTB gearshiftSRAM UgoAXS.
Kedu nke ka mma Shimano ma ọ bụ SRAM?
N'etiti ndi otu di elu dika Shimanos XTR na Srams XX1, nke, dika ndi na-ebughari uzu ahia, gosiputara ihe omuma nke ulo oru di iche iche n'uzo di egwu, ntule di mfe: Onye obula nke nwere ihe omumasekitna-achọ, na-eweIhereonye nwere nke kacha mma okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọsekitchọrọ, na-adabere na nke ọhụrụShimanoXTR.
Kedu ihe bụ Sram gearshift?
Isi ụlọ ọrụ ahụ dị na Chicago. Aha 'Ihere''bụAcronym wepụtara aha ndị guzobere ụlọ ọrụ ahụ Scott King, Stan Ray Day na Sam Patterson. Alaka Europe dị na Schweinfurt (Germany), alaka Asia na Taichung (Taiwan).
Gini ka SRAM Ugo putara?
NaSRAM Ugobụ usoro MTB gia siIhere, nke nwere gia 12. Ugbu adịise dị iche iche ụdị dị iche iche dị, ọtụtụ ojiji sitere na XC / marathon na enduro. Modeldị kachasị elu bụ wireless, eletrik MTB gearshiftSRAM UgoAXS.
Kedu nke ka mma Shimano XT ma ọ bụ SRAM?
N'ihe banyere ibu, ọnụahịa na mgbanwe na-eche, GX bụShimano XTdị obere karịa. Mana o nwere pacenti iri pere mpe. Isi okwu bụ na otu abụọ ahụ na-arụ ọrụ n’ogo yiri nke a. The GX Ugo siIherenwekwara ihe ọ ga-ewe iji bụrụ agbụrụ.
Kedu ihe bụ SRAM?
Iherena-anọchi anya: Nchekwa ohere-ohere ịnweta (Static RAM) onye nrụpụta igwe nke US, leeIhere(Ieslọ ọrụ)
Ebee ka eji SRAM?
Ngwa. A na-eji SRAM dị ka ncheta ngwa ngwa site na iji obere data dị nro ebe ọ bụla ọ dị mkpa ịnweta ngwa ngwa data ngwa ngwa, dị ka ndị nhazi dị ka oghere na na dijitalụ ma ọ bụ ihe mgbaàmà agwakọta dị ka FPGA dị ka ebe nchekwa mpaghara na mgbawa.
Kedu ka SRAM Automatix si arụ ọrụ?
NaSRAM Automatixe ji a mgbanwe nnofega na a kpọmkwem tụnyere. N'ihi usoro centrifugal, hub ahụ na-agbanwe ngwa ngwa na akpaghị aka. Ibu ibu dịtụ elu karịa nke ụdị ihe atụ. OnyeIhere- A na-enweta ebe a ma ọ bụ na-enweghị nkwụsị.
Kedu ụdị ụgbọala ụgbọ mmiri nke SRAM GX Ugo nwere?
Nke a bụ nyocha anyị ogologo oge nke SRAM GX Eagle drivetrain. Otu-mgbanaka 12-speed drivetrain na a 10-50t cassette na ihe oké ọnụ price. Ihe mbụ SRAM batara na ọsọ ọsọ 12, ọsọ ọsọ SRAM XO1 Eagle, bido n’afọ gara aga, wetara ngwa ahịa gear nke a na-anụbeghị mbụ na ahịa otu mgbaaka.
Ego ole ka SRAM GX Eagle groups?
Mgbanwe ogo na ogologo oge ga-abawanye n'ihi ya. N'akụkụ cassette, ọtụtụ n'ime ibu GX ugo ndị ọzọ na-abịa site na crankset. Naanị £ 106,99, 7000 usoro alloy cranks na-atụ oyi bụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụahịa nke carbon carbon X01, mana ị na-akwụ ụgwọ ntaramahụhụ 113g n'ihi nsonaazụ.
Ego ole ka SRAM Eagle crankset dị?
- GX Ugo Crankset Carbon: 555g - GX Eagle Cassette: 451g - GX Eagle Chain: 271g Total arọ: 1,699g (carbon), 1,793g (alloy)